Oromiyaa: WAAJIRRII diinaa maqaa hootelotaatiin hojiittii – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa: WAAJIRRII diinaa maqaa hootelotaatiin hojiittii
Oromiyaa: WAAJIRRII diinaa maqaa hootelotaatiin hojiittii bobba’e guutuu Oromiyaa keessa jira.
Magaalaa Oromiyaa keessattii hootellii akkanaa magaalaa tokkoo keessattii yoo xiqaate TOKKO ni argitu. Hootellii APPILII kun, hootelaa arsii lixaa magaalaa ADAABBAA keessatti argamu, HOOTELA_ASAFFAA_HAYILUU na yaadachiisa.
ASSAFAA hayiluu nama Sabaan amhaaraa haadhaan immoo tigree, hojii motuummaatiif bakka laga hidhaa elektirikaa MALKAA WAAKKANNAA keessatti yeroo muraasa qofa hojjataa tureedha. Akkasuma yeroo muraasa keessatti mallaqa moottuummaa wayyaaneetin hootelaa guddicha ADAABBAA keessatti beekamu ijaarate.
Hootelli kun hooteelota biroo irraa gatii Qaaliin keessatti tajaajilamtuudha.
Eegguumsii seeftii isaas akkasuma kan baayyee jabaa jedhamuudha.
Kanaaf hojjatoonnii mootummaa, keessummoonnii Fii abbootiin qabeenyaa wal mari’achuufii keessuummaa jabaa itti dhufes qubsiisuuf hooteela San qofaa kan filataniidha. Hootelicha keessatti afaan tigriffaaf afaan amhaariiffaa malee afaan oromoo bansiisuuf yaalta taanaan dubbii sitti maranii siyaasa keessa si galchuun polisoota isaan hoogganamaniin cafaqamtee, Hidhaatti kan darbatamtuudha.
Wantii biraa kan baayyee nama ajaa’ibu, oromoo ta’ee, keessuummaan jabaan magaalattii sana haajaafiis ta’ee rakkinaaf siree nagayaa gatii qaaliin qabatee yeroo boqotu, waraqaan eenyummaa isaa galmee qophaaye irratti gara galchamee qofa kan taa’uu otuu hin taanee, maaliif akka dhufe, maal akka hojjatu, eessa akka deemuu hundii isaa galmaayee waraqaan EENYUUMMAA isaas galmema keessa taa’ee, galgala POLISA amanamaa Sabaan kan biroo ta’e dhufee galmee kaayyame San sakkata’uun, nama sana Iddoo inni irraa dhufee sanattii bilbiluun namichii sun maalummaaf eenyuumman isaa qoratamee, yoo nama ilaalcha siyaasa biroo hordofu Yookiin shakkamu ta’e, halkanuma San poolisaan fuudhamee, akka barbaadanittii waan fedhan kan godhaniidha.
Kana jechuun hootellonni akkasii biyyoota Oromiyaa hunda keessatti hojii basaastummaafii tika mootummaa ta’uun tajaajilan hedduu dha. Kaleessas hardhas akkasumatti hojii gara Lamaa hojjachaa jiruuti, manneen akkasii irraa of qusachuu yookinis balleesuun isin qabdi.
Waa’ee Ajjeechaa Boodii Gaardii MM Dr Abiyyi Duraanii https://t.co/SnvREm2RZL pic.twitter.com/21RnUStzmt
— Kichuu (@kichuu24) May 27, 2019
ያሁሉ ቄሮ የሞተው አብይን 4ኪሎ አሰገብቶ የማንም ትምህክተኛ እንዲያቀረሽብን አይደለም።ያሁላ እናቶች እንባ የፈሰሰው የማንም የድሮ ስርዓት ናፋቂ አፉን እንዲከፈትብን አይደለም።ያሁላ የኦሮሞ ደም የፈሰሰው በአዲስ አበባ የሚገኙ F.M.ዎች የኦሮሞን ህዝብ በጂምላ እንዲሰደቡ አይደለም።ያሁላ ለዘመናት የቆየ የአባቶቻችን ስቃይ ማንም ተነስቶ የኦሮሞን ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ በአብይ 4 ኪሎ መግባት ተመልሷል እንዲለን አይደለም።ገና ቡዙ ምንም ያለተመለሱ የህዝባችን ጥያቄዎች አሉ።
መስዋት የከፈለው ሌላ!
የለውጡ ሙሽራው ሌላ!
ODPn Olola shiraa kana dhiisee maalif dalagaa isaa hin hojjeenne yoo Oromoo tahe!
Gaalla Nafxanyaan GDP= ODP (G=Gaalla or Goobanaa) seenaa jagnoota Oromoo fi ummata Oromoo akka kan ofii godhattee himuu barbaddi. Haatahuu malee seenaa gantoota OPDO = ODP =GDP namuu ni beeka. Kuni Gaallaan Nafxanyaa kun akkatti sobaa jiru dhageeffadhaa!
Mee jagnoota fi Hayyoota yoo kan itti amanan ykn fhugeeffatan taatee maalif Siidaa Taaddasaa Biruu fii Zegaayee Gabre Medhin maagaalaa Finfinnee keessatti akka dhaabbatnun hin godhihi qarqara Oromiyaa keessanii dhaabu! Taaddasaan jagna Salalee duwwaadha? Lakki jagna Oromoo hundaati! Gaallaan ODP-GDP tun ummata addaan hihhiuuf kana hojjettii beekaa!
Abiyyiin bara 28 ol kan diinaa wajjin tahuudhaan Oromoo lafa irraa duguugaa tureedha! Ammaas waraana mercenary isaatiin kan Oromoo fixaa jiruudha!
Amma ammoo, Gaallootni ODP kun hojii silaa dalaguu qaban dhiisaniiti siidaa jaaruu hojii godhatanii jiru ummata Oromoo afanfajeessuf. Sobaa kana Oromoon ni fudhataa ree! Hin fuhatu! Akka hin fudhanne beekkamaadha!
Oromoon ODP gaallaa nafxaynaa tana itti himaa jira yoo kan galuuf taate!
1) Ammallee nafxanyuma Habashaa tiin ajejamuu.Kana dhaabii ykn dhaabaa dha!
2) Waraana badii kana Oromiyaa keessaa baasiidha ykn baasaadha!
3) Gaditaaii ykn taa;aadhaa ABO wajjin Araaraa dhugaa buusi ykn godhiidha! Yoo kana hin goone 100% irraa 100%tti booddii tee ykn teessan kasaaraa dha!
4) Gorsa Nafxanyootaa akka Dr.. Birhaanu Negaa faa fudhachuudhaan ofin gawwoomsin/na.
5) Seenaa Toophiyaa kijibaa tana xibaaru dhiisaa ykn bira kutaa!
6) Federaalismii Dhugaa gadi dhaabuu carraaqaa! Tawaahidoo Nafxanyaa fi tan Gaallootaa Nafxanyaa goonkumaa ni barbadaawa!
7) Naannoon (states) akka barbaachisaa tahetti uumamuu ykn kililiin haaraya uumauu qaba> Fakkrnyaaf, Killiliin akka Sidaamaa, Walayitaa kan wkf naannoo ofdendeessee tahanii dhaabbachuu qabu! Statiin hoddommaachuun sirna federalismii fi dimokraasii baldhisa rakkoo takkallee biyya irratti uumuu hin dendeyu! Warri kana dura dhaabbatu Nafxanyaa Habashaa Gaallaa Nafxanyaa duwwaadhaa hubadhaa!
8) Federaalismiin naannoo (state) malee jiraachuu hin dendeyu hubadhaa! Naannoon ammoo DAANGAA malee jiraachuu hin dendeyu! Kanaaf, Naanoon Oromiyaa magaaloota ishii kan akka Finfinnee, Dirree Dawaa, Harar fi wkf dabalatee sirritti saramuu qaba! Kana silaa wanni ummata Oromoo ti hojjechuu qadan inaantee ye ODP Gaalloochi! Yigaabaachowal!
“Gawwaa bira dhawi.” Jedhe Oromoon , “Didu hoo jennaan, Duudda ykn duugda dhawii.” jedha Oromoon. Yoo Gaallootaa Nafxanyaa ODP Toophiyaa tanaaf kan galuuf taateedha!